အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေးနှစ်မျိုး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေးနှစ်မျိုး
အူလမ်းကြောင်းမှာ တည်ရှိနေတတ်တဲ့ အသားပိုလေးတွေပာာ ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အလွန်များနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ထင်ပာပ်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလို အသားပိုလေးတွေ ဖြစ်ပွားမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေရှိမလား။ သုတေသနတခုအရ အနေအထားတစ်ခုထိ တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ ဆေးနှစ်မျိုး ရှိပါသတဲ့။ အများသိကြတဲ့ အက်စပရင်ဆေးဝါးနဲ့ အိုမီဂါသရီး ဖြစ်ပါတယ်။
လူပေါင်း ခုနှစ်ရာကျော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ အဖြေကတော့ ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့တွေကို အိုမီဂါသရီးနဲ့ အက်စပရင် သောက်သုံးစေပြီး တချို့တွေကိုတော့ အာနိသင် လုံးဝမရှိတဲ့ဆေးဝါး တိုက်ကျွေးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
● အက်စပရင်ဆေးဝါး သောက်သုံးတဲ့ လူတွေပာာ အာနိသင်မဲ့ဆေးဝါး သောက်သုံးတဲ့လူတွေထက် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုပြီး အူမကြီးအဖုအကျိတ် ဖြစ်ပွားမှု ပိုနည်းပါတယ်။
● အိုမီဂါသရီးဆေးဝါး သောက်သုံးတဲ့ လူတွေပာာ အာနိသင်မဲ့ဆေးဝါး သောက်သုံးသူတွေထက် ကိုးရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုပြီး အူမကြီးအဖုအကျိတ်ဖြစ်ပွားမှု ပိုမိုနည်းပါးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါဆို ဒီဈေးသက်သာတဲ့အပြင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း အာနိသင်ကောင်းနေတဲ့ ဆေးနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်မှုဆိုရင်ရော ပိုမိုအာနိသင် မကောင်းနိုင်ဘူးလား။ နှစ်မျိုးပေါင်းပာာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖုအကျိတ် အသားပိုဖြစ်ပွားမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ အူမကြီး အသားပို ဖြစ်ပွားနှုန်း လျှော့ချနိုင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ခိုင်မာတဲ့ သုတေသနတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ရှိနေတာကြောင့် အားတက်စရာအခြေအနေကို ထပ်မံမျှော်လင့်ဖွယ်ရှိကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၂၂.၇.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ သွားနေရလား? ခေါင်းဖီးတိုင်း စိတ်ပျက်မိနေလား? အစားအသောက်ကိုသာ ကောင်းကောင်းစားပါ။ ဦးရေပြားလေး ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဆံကေသာတွေ သန်မာလာပါလိမ့်မယ်။ ဆံနွယ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို ပြောပြပါ့မယ်နော်။
နှလုံးပြဿနာ ရှိနေနိုင်ကြောင်း ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (၉) ရပ်
၂၁.၇.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဟိုဘက်အိမ်က ဦးလေးကြီး ဆုံးသွားပြီတဲ့ ... ။
ဟယ် ... မနေ့ကပဲ တွေ့သေးတယ် အကောင်းကြီးကို ... ။
ဟုတ်တယ် ... နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာလို့ ပြောတာပဲ၊ ရင်ဘတ် အောင့်တယ် ... အောင့်တယ်ဆိုပြီး သတိလစ်သွားတာ ဆေးရုံရောက်တော့ အသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့ ... ။